ShazamKit inobvumira vanogadzira kuti vabatanidze Shazam mune yavo maapps | IPhone nhau
ShazamKit inobvumira vanogadzira kuti vabatanidze Shazam mumaapps avo
Ngirozi Gonzalez | 19/06/2021 13:00 | iOS 15, WWDC 2021
Imwe yekubudirira kukuru maererano nemaapps hapana mubvunzo Shazam. Ichi chishandiso chinokutendera iwe kuti uzive rwiyo rwupi runonzwika nekungonyora chidimbu chidiki kunyangwe neruzha rwemashure. Izvi zvinozadziswa nekutenda kune tekinoroji yekuenzanisa pakati pekatalog yakakura nemamiriyoni enziyo. Muna 2017 Apple yakatenga kambani uye kubvira ipapo yakabatanidza tekinoroji yayo yese mukushandisa kwayo. Ino yave nguva yekutora kupfuura iOS uye iPadOS nekutanga iyo ShazamKit yekuvandudza kit, iyo inobvumira vanogadzira shandisa tekinoroji mukati memapurogiramu ako, kunyangwe nevanogadzira Android.
Apple inogadzira kit kit yekusimudzira kuziva mimhanzi: ShazamKit
Gadzira mashandiro muzvishandiso zvako nekucherechedza mimhanzi uye musone kusanganisa vashandisi neShazam's mimhanzi katarogu. ShazamKit inoita kuti iwe uwedzere ruzivo rweapp yako nekurega vashandisi vazive zita rerwiyo, ndiani akaiimba, genre, nezvimwe. Dzidza kuti mutambo wacho wakawanikwa kupi murwiyo kuyananisa zvemukati nezviitiko zvevashandisi.
Este yekuvandudza kit Haisi yezve Shazam uye nekuziva mimhanzi. Inoenderera zvakanyanya: ichatakura hunyanzvi hunoshandiswa naShazam yevekuvandudza maapplication. Mune mamwe mazwi, mushambadzi ava kukwanisa kugadzira mararaibhurari avo uye nekuaabatanidza muiyo Shazam-senge system. Kuti uwane ruzivo rwezvishandiso zvako.
Aya ndiwo maitiro Apple akadzivirira zvakavanzika zvesoftware iyi iyi WWDC 2021
Uye zvakare, hazvidi kuti mumhanzi uridzwe panze uye shandisa maikorofoni echishandiso kuti utore asi inogona kunyorwa munharaunda, kufambiswa kunoitwa neApple mushanduro dzichangoburwa dzeanoshanda masystem
Neichi chikuru chekutanga manejimendi kubva kuShazamKit kit, Apple inopedzisa rwendo rurefu rwekugonesa tekinoroji uye kukurudzira yehunyanzvi inodhura iyo Big Apple inodarika mamirioni mazana mana emadhora.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 15 » ShazamKit inobvumira vanogadzira kuti vabatanidze Shazam mumaapps avo
Deezer inogadzirisazve Deezer yeVagadziri app, analytics chishandiso chevaimbi uye podcasters
Frenzic: Nguva yekuwedzeredza mutambo wepuzzle ikozvino unowanikwa paApple Arcade